Theme ဒီဇိုင်းအလန်းလေး - Curve Theme
Theme ဒီဇိုင်းအလန်းလေး - Curve Theme လေးပါ ကာလာ အလန်း ဒီဇိုင်း လေးက လည်း လန်းလို့ဘော်ဒါတွေအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ အောက်မှာ ဒေါင်းင်္ပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ အဆင်ပြေပါစေ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
Curve Theme. Inspired by new S6 background.
Press on Apply Theme
To apply wallpaper:
Press on Set Wallpaper
This theme is compatible with both phones & tablets.
Rate This Application!!
Offered By : Ahmed Apps Inc.
BLOATWARE ခေါ် ဖယ်ရှားမရနိုင်သည့် ထပ်ဆောင်း APP မျာ...
ကိုယ့်ချစ်သူနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် လျှိုဝှက်ကင်မရာဖြင့် ...
Blog မှာ Facebook Comment Box ထည့်နည်း
ဘလော့မှာ cctv ကင်မရာ တပ်ထားမယ်..
blog မှာ မောက်လှုပ်ရှားတိုင်း ပူစီပေါင်းလေးတွေ အပေ...
ဘလော့အတွက် အပေါ်သို့ဆိုတဲ့ မျှားထည့်နည်း
blog post title ကိုကာလာအမျိ်ုးမျိုးပြောင်းလဲနေအောင...
ပုံကိုထိလိုက်တာနဲ့ ပုံက ပတ်ပတ်လည်နေစေအောင်
Gmail အကောင့်နှင့် Facebook အကောင့်ဖျက်နည်း
Windows7မှာဖြစ်တတ် တဲ့ This Copy Of Windows is N...
Root ဖောက်ပေးစရာမလိုဘဲ မြန်​မာစာ ရနိုင်​တဲ့ Zawgyi...
Gmail Account တစ်ခုတည်းနဲ့Facebook Account တွေ အ...
ဖုန်းထဲမှာ မိမိ အသံကို မျိုးစုံ ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်...
Facebook Virus ကို ဖုန်းမှ တစ်ဆင့် ဖယ်ရှားနည်း
Cambridge တက္ကသိုလ်ကနေထုတ်တဲ့ Cambridge Advanced Gr...
သင့်ရဲ့ Facebook News Feed ပေါ်မှာ အလိုရှိရာ Friend...
News Feed ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် See First featur...
Andriod Digital TV Receiver
OFFICESUITE 8 PREMIUM + PDF CONVERTER V8.3.3778 AP...
ပျောက်ဆုံးသွားသည့် Android ဖုန်းကို ခြေရာခံခြင်း
Video, Call and Catting သုံးနိုင်တဲ့-Skype - free ...
Facebook က iOS App အတွက် Image Uploader အသစ်ပြုလုပ...
BlackBerry က iOS နှင့် Android ရှိ သူ၏ Messenger တ...
BlackBerry နှင့် Android စမတ်ဖုန်း လုံခြုံရေး ပိုင...
ဖုန်းနှင့် TABLET ထဲမှာ ဖိုင်းလေးနဲ့ထားမယ်-FILE MA...
SMADAV PRO 2015 REV. V10.2 + SERIAL & KEYGEN (9-JU...
INTERNET DOWNLOAD MANAGER V6.23 BUILD 14 + PATCH (...
ဒီဇိုင်းအလန်းဆုံး - Metallic Icon Pack Theme v1.0....
သီချင်းတွေ ကိုအကောင်းဆုံးနားဆင်နိုင်မယ့် - Equaliz...
ဖုန်းမှာ Root မလို Backup ဆော့ဝဲကောင်းလေး - Helium...
ဖုန်းမှာ လေးနေတာတွေရှင်းလင်းပေးမယ့် - Cleaner v: 2...
INTERNET DOWNLOAD MANAGER 6.23 BUILD 14 [JUST DOUB...
刷机精灵Shuame_Setup_0.9.3_general ဆိုတဲ့ Software သုံ...
မိမိဖုန်းကို Diamond Live Wallpaper နဲ့အလှဆင်မယ်
APP,GAME တွေ SD CARD ထဲရွှေ့မရဖြစ်နေပြီလား...
စစ်တွေ ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်မှ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများ ရ...
HOW TO ROOT GALAXY A3 - SM-A300F
အင်တာနက်လိုင်း မြန်အောင် လုပ်နည်း
အနာဂတ် Samsung Galaxy ဖုန်းများ၏ အချက်အလက်များ ပေါ...
Samsung Galaxy Tab A 8.0 ရဲ့အားနည်းချက် ၊ အားသာချက...
Root ဖောက်ထားတာတွေကိုဖျက်ချင် Root ဖြစ်မဖြစ်ကြည့် ...
ANDROID ဖုန်းထဲမှာ VIRUS ကာကွယ်မယ့်-CM SECURITY AN...
Script Phising Clash of Clans by Idiot Attacker
HUAWEI Firmware များစုစည်းမှု့
Android ဖုန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှ မကြည့်ရအောင်ပိတ်ထားမယ်-...
မြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်သုံးပြီး Facebook Account ဖွင...
Hack ပြီး2Step ခံသွားတဲ့ G-mail ကို ပြန်လိုက်နည်...
Really Learn 200 Phrasal Verbs စာအုပ် PDF
♪ ZTE က တန်ဖိုးနည်း Maven နှင့် Sonata2စမတ်ဖုန်း...
Dell IN5558 Notebook
Samsung ၏အပါးလွှာဆုံးစမတ်ဖုန်း Galaxy A8
Express Dictionary E-book နှင့် Activity book free...
အနက်ရောင်ကြိုက်သူများအတွက် - BLAK AZURRO CM12 THEM...
ကျောင်းသားတိုင်းCသိထားသင့်တဲ့ GOOGLE ကိုလက်တွေ့အသံ...
FACEBOOK မှဘော်ဒါတွေကို VIDEO CALL ခေါ်နိုင်တဲ့ MES...
English Speaking and Listening Apk
VCD DVD ခွေပျက်များမှ ဒေတာများ ပြန်လည်ယူကြည့် ရအော...
CDMA ဖုန်းလိုင်းများကို တစ်ချိန်၌ GSM သို့မဟုတ် WC...
အင်္ဂလိပ်-သဒ္ဒါ အောက်ခြေသိမ်းအသုံးများ အခြေခံအကျဆုံး ...
ဖုန်းကနေ CCTV OR WEBCAM အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော-TIN...
Huawei P8 ရဲ့ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် ၊ ဒီဇိုင်း ၊...
အသုံးများ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ၁၀၀၀ စာအုပ်
ဖုန်းခေါ်ဆို ပြောသမျှကို မှတ်ထားပေးမယ့် - Call Reco...
ဖုန်းမှာတင် ပုံတွေကိုပိုလှအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ - H...
SMS ပို့ရင် အသံလေးပါပို့လို့ရတဲ့ - SMS by Voice
Samsung Galaxy S6 Launcher ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ လန်းနိုင...
ဖုန်းကိုပေါ့ပါးပြီး ဂိမ်းတွေကို အမြန်ဆော့ကစားနိုင်...
ဖုန်းစရင်မှာ အသံအတိုးအချဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ - AudioBar ...
Viber ကိုမိမိဖုန်းနံပါတ် မသုံးဘဲ အသုံးပြုနည်း
မီမီကိုယ်ပိုင်ဘလော့မှာ မီမီ Twitter ထည်ချင်သူများအ...
Aiseesoft 3D Converter 6.3.68 Multilingual + Crack...
Android mm font changer စုသည်းမူ
Samsung USB Drivers များကို ဖုန်းအမျိုးအစားအလိုက...
Samsung Galaxy ဖုန်းတွေအတွက် အလွယ်တကူ Download Mod...
Android ဖုန်းများအတွက် Android Root Checker, စုစည်...
Zenfone ချစ်သူများအတွက် One Click Root Tool (Zenfo...
ဖုန်းမှာ ဖိုင်းဆိုဒ်ကြီးကြီးတွေကို အမြန်ဒေါင်းနိုင...
ဖုန်းမှာ pdf ဖိုင်တွေ စာအုပ်တွေအလွယ်ဖတ်နိုင်တဲ့ - ...
လူကြိုက်များတဲ့ - Next Launcher 3D Shell v3.5 Apk
Xiaomi ရဲ့ Redminote 3G 2sim ရဲ့ Root
ဆွေမျိုးချင်း လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာမရလို့ အက်စစ်နဲ့ပက် - ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ် ဂူခ်ျရတ်မြို့မှာ ကျောင်းသွားဖို့ ဘတ်စ်ကားစောင့်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ၃ ယောက်ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူတစ်စုက ဒီနေ့မနက်က အက...
Daily Words English to Myanmar APK - အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာနေသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လေးတန်း၊ ငါးတန်း၊ ခြောက်တန်းကနေ ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်းအထိ ကျောင်းသားသုံး အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေကိုြ...